यी सुन्दरी ईनिस्पेक्टरले समातिन राजधानीमा गुण्डागर्दीमार्फत व्यवसायीबाट हप्ता असुल्ने गुण्डालाई !! - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /समाचार/यी सुन्दरी ईनिस्पेक्टरले समातिन राजधानीमा गुण्डागर्दीमार्फत व्यवसायीबाट हप्ता असुल्ने गुण्डालाई !!
राजधानीमा गुण्डागर्दीमार्फत व्यवसायीबाट हप्ता असुल्ने धन्दामा सक्रिय निमा लामा भन्ने राजेन्द्र लामालाई पक्राउ गरेपछि सो क्षेत्रका स्थानियले केही राहत महशुष गरेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौंले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।लामालाई काठमाडौंको कोटेश्वरबाट प्रहरी निरीक्षक एलिजा गिरीको कमाण्डमा गएको टोलीले मंगलबार बिहान पक्राउ गरेको हो । फरक क्षेत्रवाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी गिरीले कोटेश्वरमा इन्चार्ज पद सम्हाल्नासाथ पाएको सफलताले उनको चर्चा झन चुलिएको हो । लामाका हरेक अराजक र गैरकानूनी क्रियाकलापबाट आजित बनेका सर्वसाधारणहरूको उजुरीपछि निरीक्षक गिरी एक्सनमा उत्रिएकी हुन् ।
नायक सरोज खनाल आफैले अन्डा वितरण गर्दै भन्छन्ः चोरेको होइन
आज काठमाडौँका सबै निजी विद्यालयमा विदा !!
उडिरहेको प्लेनबाट एक यात्रु खसेपछि
नियम मिच्ने गृहका हाकिमले प्रहरीको जागिर खाइदिने धम्कीदिएपछि